अधिक मात्रामा मोबाइल, ल्यापटप प्रयोगले मानवीय जीवनमा के कस्तो असर गर्छ ? - आजकोNepal
अधिक मात्रामा मोबाइल, ल्यापटप प्रयोगले मानवीय जीवनमा के कस्तो असर गर्छ ?
संवाददाता २४ कार्तिक २०७७, 3:16 pm
कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल, जस्ता विद्युतिय उपकरणहरूलाई एकमुष्ठ रुपम ईलेक्ट्रोनिक्स ग्याजेट्स भनिन्छ । यी उपकरणको प्रयोग गर्न थालेपछि हाम्रो जीवनशैली बदलिएको छ । जीवनका हरेक पाटामा यी यन्त्र एवं उपकरणहरूको प्रयोग हुन थालेपछि हाम्रो जीवन अत्यन्त सुगम बनेको छ । तर हाम्रो जीवनशैलीमा लामो समयदेखि घुलमिल भईरहँदा यी यन्त्र एवं उपकरणहरूले मानव स्वास्थ्यमा गहिरो असर समेत पुर्‍याउँदै गएको छ ।